ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီက လီဗာပူးအသင်းဟာ ပရီးမီးယားလိဂ်ဖလားကိုလွှတ်ပစ်ခဲ့ပြီး ဒုတိယနဲ့သာကျေနပ်ခဲ့ရသလို ဒီနှစ်မှာလည်း ဖိအားတွေကိုခံနိုင်ရည်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ လီဗာပူးတိုက်စစ်မှူးဟောင်း ဒီအော့ဖ်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီက လီဗာပူးအသင်းနဲ့ မန်စီးတီးအသင်းတို့ဟာ တစ်ရာသီလုံးအမှတ်ပေးဖလားရရှိဖို့ ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကြပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ အဆုံးမှာတော့ ပက်ဂွါဒီယိုလာရဲ့အသင်းကသာ လီဗာပူးအသင်းကို ၁ မှတ်အသာနဲ့ ချန်ပီယံဆုဖလားကိုသိမ်းပိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။
၂၀၀၂-၂၀၀၅ ရာသီအတွင်းပွဲစဉ် ၈၀ ပွဲထွက်ကစားခွင့်ရခဲ့ပြီး သွင်းဂိုး၆ ဂိုးသွင်းယူပေးခဲ့တဲ့ ဒီအော့ဖ်က ”ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီက သူတို့လွဲချော်ခဲ့သလိုပဲ ဒီရာသီမှာလည်းကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်မယ်လို့ ကျွန်တော်မမြင်မိဘူး“လို့ ပြောပါတယ်။
ဒီအော့ဖ်က “ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကအမှတ်ပေးဖလားရရှိဖို့ လီဗာပူးအသင်းကအခွင့်အရေးရှိခဲ့ပါတယ်၊ သူတို့လက်ထဲမှာပဲရှိခဲ့တာပါ၊ ခရစ္စမတ်ကာလတုန်းက လီဗာပူးကစီးတီးကို ၇ မှတ်ဖြတ်ထားနိုင်ခဲ့တာပါ”
”ဒါပေမဲ့ သူတို့ ဆုဖလားမရခဲ့ပါဘူး၊ ကျွန်တော်ထင်ထားခဲ့သလိုပဲ ရာသီကုန်ဆုံးချိန်မှာ စီးတီးကအနိုင်ယူသွားခဲ့ပါတယ်၊ အင်္ဂလန်မှာသူတို့ပြောခဲ့သလိုပဲ သူတို့ ဆုဖလားကိုလွှတ်ပစ်ခဲ့တယ်လို့ ကျွန်တော် ထင်ပါတယ်“လို့ ဆက်ပြောပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီး ဒီအော့ဖ်က “ခင်ဗျားတစ်ရာသီလုံးမှာ တစ်ပွဲပဲရှုံးနိမ့်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ခင်ဗျားရာသီကုန်မှာဖလားမရနိုင်ဘူးလား? ဒီရာသီမှာလည်းတူညီတဲ့ဖြစ်ရပ်မျိုး ဖြစ်လာမလားဆိုတာ ကျွန်တော် တွေးရမှာတောင် ခက်ခဲပါတယ်”
”စီးတီးကပဲသူတို့ကိုထပ်ပြီးအနိုင်ယူသွားပါလိမ့်မယ်“လို့ ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒီရာသီမှာတော့ လီဗာပူးအသင်းဟာ ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ် ၆ ပွဲစလုံးအနိုင်ရရှိထားပြီး ဒီနေ့ညနေမှာတော့ ရှက်ဖီးလ်ယူနိုက်တက်အသင်းကို ဧည့်သည်အဖြစ် သွားရောက်ယှဉ်ပြိုင် ကစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
လီဗာပူးကို အမုနျးကြိနျစာမပွယျသေးတဲ့ဒီအော့ဖျ…ဒီနှဈလညျး ခနျြပီယံဖွဈမှာမဟုတျဘူးလို့ လီဗာပူးကို ဒီအော့ဖျတိုကျခိုကျ
ပွီးခဲ့တဲ့ရာသီက လီဗာပူးအသငျးဟာ ပရီးမီးယားလိဂျဖလားကိုလှတျပဈခဲ့ပွီး ဒုတိယနဲ့သာကနြေပျခဲ့ရသလို ဒီနှဈမှာလညျး ဖိအားတှကေိုခံနိုငျရညျရှိမှာမဟုတျဘူးလို့ လီဗာပူးတိုကျစဈမှူးဟောငျး ဒီအော့ဖျကပွောကွားလိုကျပါတယျ။
ပွီးခဲ့တဲ့ရာသီက လီဗာပူးအသငျးနဲ့ မနျစီးတီးအသငျးတို့ဟာ တဈရာသီလုံးအမှတျပေးဖလားရရှိဖို့ ယှဉျပွိုငျခဲ့ကွပါတယျ၊ ဒါပမေဲ့ အဆုံးမှာတော့ ပကျဂှါဒီယိုလာရဲ့အသငျးကသာ လီဗာပူးအသငျးကို ၁ မှတျအသာနဲ့ ခနျြပီယံဆုဖလားကိုသိမျးပိုကျသှားခဲ့ပါတယျ။
၂၀၀၂-၂၀၀၅ ရာသီအတှငျးပှဲစဉျ ၈၀ ပှဲထှကျကစားခှငျ့ရခဲ့ပွီး သှငျးဂိုး၆ ဂိုးသှငျးယူပေးခဲ့တဲ့ ဒီအော့ဖျက ”ပွီးခဲ့တဲ့ရာသီက သူတို့လှဲခြျောခဲ့သလိုပဲ ဒီရာသီမှာလညျးကောငျးကောငျးလုပျနိုငျမယျလို့ ကြှနျတျောမမွငျမိဘူး“လို့ ပွောပါတယျ။
ဒီအော့ဖျက “ပွီးခဲ့တဲ့ရာသီကအမှတျပေးဖလားရရှိဖို့ လီဗာပူးအသငျးကအခှငျ့အရေးရှိခဲ့ပါတယျ၊ သူတို့လကျထဲမှာပဲရှိခဲ့တာပါ၊ ခရစ်စမတျကာလတုနျးက လီဗာပူးကစီးတီးကို ၇ မှတျဖွတျထားနိုငျခဲ့တာပါ”
”ဒါပမေဲ့ သူတို့ ဆုဖလားမရခဲ့ပါဘူး၊ ကြှနျတျောထငျထားခဲ့သလိုပဲ ရာသီကုနျဆုံးခြိနျမှာ စီးတီးကအနိုငျယူသှားခဲ့ပါတယျ၊ အင်ျဂလနျမှာသူတို့ပွောခဲ့သလိုပဲ သူတို့ ဆုဖလားကိုလှတျပဈခဲ့တယျလို့ ကြှနျတျော ထငျပါတယျ“လို့ ဆကျပွောပါတယျ။
ဆကျလကျပွီး ဒီအော့ဖျက “ခငျဗြားတဈရာသီလုံးမှာ တဈပှဲပဲရှုံးနိမျ့ခဲ့မယျဆိုရငျ ခငျဗြားရာသီကုနျမှာဖလားမရနိုငျဘူးလား? ဒီရာသီမှာလညျးတူညီတဲ့ဖွဈရပျမြိုး ဖွဈလာမလားဆိုတာ ကြှနျတျော တှေးရမှာတောငျ ခကျခဲပါတယျ”
”စီးတီးကပဲသူတို့ကိုထပျပွီးအနိုငျယူသှားပါလိမျ့မယျ“လို့ ပွောသှားခဲ့ပါတယျ။ ဒီရာသီမှာတော့ လီဗာပူးအသငျးဟာ ပရီးမီးယားလိဂျပှဲစဉျ ၆ ပှဲစလုံးအနိုငျရရှိထားပွီး ဒီနညေ့နမှောတော့ ရှကျဖီးလျယူနိုကျတကျအသငျးကို ဧညျ့သညျအဖွဈ သှားရောကျယှဉျပွိုငျ ကစားရမှာဖွဈပါတယျ။